Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: March 17, 2018 10: 12 Awekho amazwana
Iqiniso noma Amanga? ... chaza ukuthi kungani?
Funda izinkulumo zikaDkt ML King kusukela eminyakeni engu-2 edlule yokuphila kwakhe… Akabulawa ngoba wayenephupho. "Ubulawa ngoba uvukile"
Ulwazi lwe-Zoological: yini le oyibiza ngeMvubu ngolimi lwakho lwebele? … Imvubu, ngaphansi komoya wayo wokuzwela onenzondo, ngokuqinisekile iyizinhlobo zasendle zombuso wezilwane… .Hunter ngemuva kweHippopotamus ayinikezwe wonke umuntu. "I-melanin kuphela enaleli khono"
I-Oct20 07: 31